အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Taking Oath and Seeking the Guidance
Order : 6/2014
Order : 30/2017
Opening Commission Office
About ACCM Logo
Acting condition of complaint letter
Points to be noted for complaint
Asset Declaration Form
ACC Against COVID-19
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ (၁၂) ရက်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား ယနေ့နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန (၁၈) ခုတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး အဖွဲ့(CPU)ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မြှင့်တင်ရေး အတွက် မူလတန်းအဆင့်၊အလယ်တန်းအဆင့် ပညာပေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်မှု လူငယ်စခန်းကို နေပြည်တော်တွင် ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ အများပြည်သူအကျိုး ထုတ်ဖော်သတင်းပေးသူများအား အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေမှု အပါအဝင် ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်နှင့်အတူ အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်းနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မြတ်မြတ်စိုး၊ ကော်မရှင်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UNODC Country Manager ဖြစ်သူ Mr. Benedikt Hofmann အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် USAID Mission Director ဖြစ်သူ Ms. Aler Grubbs နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်း၊ အမေရိကန်သံရုံးမှ First Secretary ဖြစ်သူ Mr. Ryan McKean ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်း အမေရိကန်သံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ 2019 IMF Article IV Consultation Mission မှ Mission Chief Mr. Shanaka Jayanath Peiris နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Steve Marshall နှင့် Chief Ombudsman, Mr. Peter Boshier ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UNODC ရုံးမှ Country Manager ဖြစ်သူ Mr. Troels Vester အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christine Schraner Burgener ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
Telephone : +95 67 810 3347
Email : accm@accm.gov.mm